Reysarwasaare Rooble oo soo dhaweeyey jawdalka doorashasa soomaaliya. - Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Reysarwasaare Rooble oo soo dhaweeyey jawdalka doorashasa soomaaliya.
Reysarwasaare Rooble oo soo dhaweeyey jawdalka doorashasa soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda xil-gaadhsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo saaray qoraal uu ku soo dhaweynayo jadwalka hannaanka doorashooyinka labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
“Waxaan soo dhaweynayaa oo bogaadinayaa jadwalka ay shaaciyeen guddiga maamulka doorashooyinka ee heer federaal, kaas oo si faahfaahsan u qeexaya xilliyada iyo qaabka ay u dhaceyso doorashada Aqalka Sare iyo Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya,” ayuu Ra’iisul Wasaare Rooble ku yidhi qoraalkan uu soo saaray.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa mar kale shacabka Soomaaliyeed uga mahad celiyay dulqaadka iyo sidii ay ugu garab istaageen dadaalladii uu hormuudka ka ahaa ee horseeday heshiiska doorashooyinka dalka oo Muqdisho ay ku gaadheen isaga iyo madaxda dowlad goboleedyada.
Previous articleCiidamada Danab oo wareer ku diley Sarkaal ka tirsanaa Alshabaab.
Next articleMaxkamada yurub oo go’aan ka dhan ah dumarka muslimiinta soo saarey.